Mpampianatra Oniversite Miantso Ny Hamaranana ny Politikan’ny Zaza Tokana Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2013 1:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy azo hozongozonina ny politikan'ny zaza tokana ao Shina, hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra faratampon'ny fandrindram-pianakaviana iray tamin'ny 14 Janoary 2013. Hoy ny Minisitry Ny Mponina Nasionaly sy ny Vaomieran'ny Fandrindram-Pianakaviana Wang Xia:
Tokony hanana tanjona lavitr'ezaka ny politika iray, ary ny tanjona voalohany dia ny hitazonana ny hakelezan'ny taham-piterahana sy ny fanatsarana izany.
Nanomboka vao haingana tao ny adi-hevitra raha tonga ny fotoana hialana amin'ity politika ity, izay narehitry ny fahaleovan'ny olona ny ambaratongan-drafitra amin'ny fanerena hanaovana fanalan-jaza. Tamin'ny Jolay 2012 no niantsoan'ny mpampianatra oniversite ny hanaovana ny politikan'ny zaza roa; tamin'ny Nov 2012, mpahay toe-karena mihoatra ny 30 no nandrisika ny hamaranana ny politikan'ny zaza roa. Niteraka adi-hevitra mafana hafa ao amin'ny media sosialy Shinoa ny fanambarana fitsipahana ny siosion-dresaka fa hajanona ny politikan'ny zaza tokana. Ao amin'ny Sina Weibo aza dia io no lasa lohahevitra mafana laharana voalohany tamin'ny 16 sy 17 janoary.
pikan-tsarin'ny fitaterana ny zazatokana ho “amperora kely” ao Shina (avy amin'ny youku)
Ao amin'ny fitsapa-kevitra nataon'ny Weibo aza dia mihoatra ny 12.000 ny mpisera ny aterineto no mitazona fa izao no fotoana hanesorana ny politikan'ny zaza tokana raha 5000 ihany no mbola manohana ilay politika.
Mandresy lahatra moa ny mpanohana fa efa be mponina i Shina, ka raha tsy misy ilay politika dia ho maro loatra ny olona. Ny lehiben'ny Fanoratana ao amin'ny Global Times Hu Xijin [Hz] no nandray ny fitarihana izany:
Manohana ny politikan'ny zaza tokana aho; fa manohana ihany koa ny famahana tsikelikely ny politika sasany any amin'ny faritra sasany. Zavabita goavana ao Shina ny fifehezana ny taha-piterahana avo. Tsy tiako ny hahita ny taranaka ahitana mponina roa na telo miliara ao amin'ny firenena iray. Efa avela hanan-janaka roa ny mpivady roa samy zaza tokana ao amin'ny fianakaviana; miarahaba azy ireny aho. Fa tsy midika ho fampitsaharana ny politikan'ny zaza tokana izany.
Saingy tahaka ny tsy mahita ny olana ara-mponina ankehitriny ateraky ny politikan'ny zaza tokana ireo mpanohana. Maro ny mpampianatra onivrsite sy mpanay toe-karena no mandresy lahatra fa niteraka andian'olana lavitr'ezaka ny politikan'ny zaza tokana, ao anatin'izany ny fahanteran'ny mponina sy ny tsy fitovitovian'isan'ny lahy sy ny vavy. Nilaza ihany koa ry zareo fa tsy hanan-janaka maro ny Shinoa na tsy hisy aza ilay politika.
Niantso ny hanitsiana haingana ilay politika ny mpiara-manorina ny Ctrip Liang Jianzhang[zh]:
Nitarika “fivadihan'ny piramida”-n'ny rafitry ny mponina miaraka amin'ny loza tsy nirìna mety hitranga eo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena sy eo amin'ny olana ara-tsosialy isan-karazany io politika henjana io. Tsy azo ahemotra ny fanitsiana politika!
Liang also Nanoratra [zh] fanehoan-kevitra ao amin'ny teny Shinoan'ny Wall Street Journal manazava ny tsy tokony hanerena intsony ny fitazonana ny taham-piterahana ambany ihany koa i Liang.
Manampy fanazavana ny Profesora Wu Bihu avy ao amin'ny Oniversiten'i Beijing:
Maro ny tombontsoa ao amin'ny Vaomieran'ny mponina sy ny Fandrindram-Pianakaviana tafiditra, satria asan'olona maro no tafiditra sy ny onitra volabe aloa amin'ny zaza faharoa. Saingy tsy tokony alain'ny Vaomieran'ny Mponina sy ny Fandrindra-pianakaviana. Ny fanerena hanala zaza, ny olana ara-tsosialy avy amin'ny zaza tokana, ny tsy firindran'ny isan'ny lahy sy ny vavy, ny fahanteran'ny mponina haingana, ny fihenan'ny fiterahana noho ny halafon'ny fitaizana zaza, efa fanondroana avokoa ireo rehetra ireo fa efa afa-matory ny politikan'ny zaza tokana.
Yuan Li[zh], lehiben'ny fanoratana ao amin'ny Wall Street Journal China namoaka antontan'isa ho fanohanana ny fanambaran'i Wut:
Naorina tamin'ny 1981 ny Vaomieran'ny Mponina sy ny Fandrindra-Pianakaviana. Misy atsasa-tapitrisa miasa feno sy mpiasa 6 tapitrisa miasa tapak'andro [ao] amin'izao fotoana izao. Mandray onitra mahatratra an-tapitrisany dolara isan-taona ry zareo.
Nanome akony ny mpahay toe-karena Mao Yushi[zh] :
Ny marina, misy mpiasa ambony an'arivony very asa raha vao foanana ilay politika. Adin'ny fiainana sy ny fahafatesana izany.
Manadihady ao amin'ny bilaoginy ny mpikaroka ara-piaraha-monina Yi Fuxian[zh]:
Maro ny olona no mieritreritra fa afa-miantoka ny fitohizan'ny fitomboan-karenan'i Shina ny fanitarana ny tanàn-dehibe. Avy amin'ny zoron'ny firafitry ny mponina, tsy ho vitan'i Shina ny hanao fahagagana ara-toe-karena tahaka izay niainan'i Japan, Taiwan ary Korea. Tsy kisedrasendra ny fitsontsoriky ny toe-karenan'i Shina. Mampihena ny fiterahana ihany koa ny fanitarana ny tanàn-dehibe. Mila mampitsahatra ny politikan'ny zaza tokana avy hatrany i Shina.